Hetsika etsy amin’ny 13 mai : Tsy mahafehy ny olony intsony Ravalomanana -
AccueilSongandinaHetsika etsy amin’ny 13 mai : Tsy mahafehy ny olony intsony Ravalomanana
Tsy misy mihaino ny toromarika avy amin-dRavalomanana Marc intsony ny mpomba azy amin’izao fotoana izao. Izany hoe tsy to teny amin’ireo mpikatroka ao amin’ny antoko Tim intsony ity filoha nasionaly ity. Hatramin’ny androany mantsy dia tsy misy akony amin’ireto olony ireto ny fanambarana nataony ny amin’ny hoe tsy azo ekena ny fanonganam-panjakana, ary tsy hankasitraka izany mihitsy ity Filoha teo aloha ity na ho inona antony na ho inona. Toa ny rano nararaka teo an-damosin’ny ganagana anefa izany foto-kevitry ny filoha nasionalin’ny tim izany. Efa ny hanongam-panjakana mantsy no tanjon-dry depiote Hanitra sy ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’io antokony io, ka dia misisika mampiaka-peo etsy an-kianja ihany ry Hanitra Razafimanantsoa sy ny ekipany. Hany ka lasa mivaralila tanteraka, ary baranahiny tanteraka ny fiainan’ny antoko Tiko I Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ny ambaran’ny lohany hafa, ny ataon’ny mpikambana ny mifanohitra amin’izay.
Saika ireo olona nitokona tao amin’ny Magro sisa no miaritra masoandro manoloana ny lapan’ny Tanàna ankehitriny . Tranga mbola manaporofo fa na ireo mpikambana faran’izay madinika indrindra aza dia tsy mihaino ny mpitarika azy intsony. Tsy mahagaga araka izany raha toa ka hisy antoko politika vaovao hitsangana ato ho ato, ary ireo solombavambahoaka Tim etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai no hitarika izany. Hihanjahanja eo kosa i Marc Ravalomanana izay mbola misora-tena fa filoha nasionalin’ny antoko Tim amin’izao fotoana izao. Eny fa na dia ny vady andefimandriny aza efa manohitra ny hevitr’ity filoha teo aloha ity. Noteren’i Lalao Ravalomanana hanidy ny toeram-piasany ihany koa mantsy ireo mpiasa manerana ireo boriborintany miisa enina mandrafitra ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy mamonjy ny kianjan’ny 13 Mai izy ireo hanamaro isa ireo mpitokona efa mihavitsy amin’izao fotoana izao raha ny nambaran’ireo mpiasa. Fihetsika, na fanapahan-kevitra tsy azo lavina fa ny hanamafy ny fanonganam-panjakana no tanjona amin’izany.